कतातिर सिरान गरेर सेक्स गर्दा मिल्छ शुभफल ? - Everest Dainik - News from Nepal
कतातिर सिरान गरेर सेक्स गर्दा मिल्छ शुभफल ?
यदि तपाई यौनजीवनलाई राम्रो र रोमाञ्चक बनाउन चाहानुहुन्छ भने त्यसका लागि केही सामान्य कुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । तपाई सेक्समा त्यति बेला इन्जोय गर्न सक्नु हुन्छ जसका बारेमा तपाईलाई राम्रो जानकारी हुुन्छ ।
शारीरिक सम्बन्ध बनाउन भन्दा पहिला केही स–साना कुरामा विचार गर्न जरुरी छ । जसले सेक्सलाई प्रभावित गर्ने गर्दछन् । त्यसका लागि सेक्सका सही आसनका बारेमा ज्ञान हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी सेक्सका लागि सही दिशाका बारेमा पनि ज्ञान हुन जरुरी छ । सही दिशामा रहेर सेक्स गर्दा त्यसको मज्जा बेग्लै हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सेक्स गर्दा महिलाले आवाज किन निकाल्छन ?
उत्तरतिर सिरान गरे सुत्दा सेक्सजीवन मात्रै प्रभावित हुने होइन स्वास्थ्य जीवनमा पनि नराम्रो प्रभाव पार्ने बताइएको छ । उत्तरतिर सिरानी गरेर सेक्स गरेपछि अधिक थकावट महसूस हुने खुलासा भएको छ । जसको प्रमुख कारण हो चुम्बकीय तरंङ हो । जसले मानव शरीरलाई प्रभावित गर्दछ । भने त्यसको ठीक उल्टो दक्षिणतिर सिरानी गरेर सुत्दा सम्बन्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ । जसले सम्बन्ध गाढा हुने र सेक्समा धेरै मज्जा आउने बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कुन विषय पढ्नेले धेरै सेक्स गर्न रुचाउँछन् ?
त्यसैगरी पश्चिमतिर सिरानी राखेर सुत्दा र सेक्स गर्नाले यौनजीवन सामान्य रहने र गहिरो निन्द्रा पर्ने ज्योतिषीहरुको दावी छ । साथै पूर्वतिर सिरानी बनाई सुत्दा र सेक्स गर्नाले एउटा पार्टनर निक्रिय र अर्को कुन्ठित हुने उनीहरुको दावी छ । तपाईको पार्टनर दक्षिण दिशातिर सिरानी बनाई बढी सहज महसूस गर्छन भने यो दिशा सेक्सका लागि अति उपयुक्त हो । एजेन्सी
याे पनि पढ्नुस यौन इच्छा हुँदा पनि उत्तेजना आउँदैन किन ?
ट्याग्स: Direction, sex, याैन अाशन, सिरानी, सेक्स